Ukutya Kunye Nesondlo | Isilimela 2022
Ungalahla njani iiponti ezili-10 kwiiveki ezi-3: Iingcebiso ezilula ezingama-20
Ukucinga ukuba uza kuncipha njani ngokukhawuleza? Nantsi imigaqo engama-20 yendlela yokulahla iiponti ezili-10 kwiiveki ezi-3-landela la manyathelo kwaye uya kulungela ngokukhawuleza.
I-15 yezona ziqhamo zihle kakhulu zokulahleka kwesisindo kunye nendlela onokonwabela ngayo yonke imihla
Zeziphi iziqhamo ezilungileyo ekulahlekeni kobunzima? Nazi iziqhamo ezili-15 ezilungileyo zokulahleka kwesisindo ukudibanisa kwisicwangciso sakho sokutya esinokukunceda uchithe iiponti.
I-8 yeeTi eziGqwesileyo zokuphulukana nobunzima kunye nokutsha kwamafutha
Baninzi abantu abafumana iindlela zokunciphisa umzimba. Ngaba uyazibuza ukuba yeyiphi eyona tea ilungileyo yokunciphisa umzimba? Funda ngakumbi malunga nokuba loluphi uhlobo lweti olufanela incasa yakho kunye neemfuno zakho.
Izibonelelo ezi-6 zeMpilo yeBeetroot Powder (kwaye ungayikhetha njani elungileyo)
I-Beetroot igcwele i-antioxidants kunye ne-nitrate. Nazi izibonelelo zezempilo ezi-6 ze-beetroot powder kunye nendlela yokukhetha elungileyo.
Ukutya okulula okusemsebenzini okungama-25: Ukunciphisa iNdlala kunye nokuKhulisa ukuPhumelela
Amashwamshwam asempilweni anokukunceda ukuba uhlangabezane namaxesha obekiweyo, ugcine ubunzima obunempilo, uphucule ukusebenza kwakho kwaye wonwabe ngokupheleleyo!
Iiresiphi ezingama-21 zokutya isidlo sasemini ukuze uphulukane nobunzima kunye namandla omzimba
Umkhwa wokutya kukunye, nangona kubaluleke kakhulu, intsika yokwehla kobunzima kunye nokwakha izihlunu. Makhe sihlolisise ezinye iiresiphi ezinesidlo sangokuhlwa ukuze unciphise umzimba onokuthi ubandakanye.
I-10 yezeMpilo eziPhilileyo kunye neNdalo yokuNciphisa ukuThoba umzimba
Ukwehla kwesisindo akukho nzima njengoko ucinga. Nazi i-10 ezimangalisayo zokwehla kobunzima bendalo eziza kukunceda uchithe iiponti ezingafunekiyo.
I-13 yokutya okuLungileyo kokutya ebusuku (Iingcebiso ezivela kuMqeqeshi wezeMpilo)
Ngaba ujonge ukutya ozokutya ngaphambi kokuba ulale? Nazi izinto ezilungileyo onokuzitya ebusuku ukwanelisa iminqweno yakho kunye nokuphucula umgangatho wokulala kwakho.
Ukutya kweMisipha: Indlela yokutya ukuze ulahlekelwe ngamafutha kunye nokwakha izihlunu
Ngaba ufuna ukuphulukana namanqatha kunye nokwakha umsipha kodwa ungazi ukuba ungaqala ngaphi? Eli nqaku liza kujonga kwisondlo esifanelekileyo sokwakha ukutya okuya kuguqula iziphumo zakho.
25 Eyona ndlela yokutya yokutya okutya kwasekuseni enika abantu abaxakekileyo
Zama ezi 25 ngokukhawuleza kunye nokulula kokunciphisa ubunzima zokupheka kwasekuseni. Nika umzimba wakho oko ukufunayo ukuze uhlale wanelisekile emini kwaye uphephe inkanuko yeswekile!
Ukuzila ukutya okungapheliyo kwabaQalayo (Indlela yokuKhokela)
Ukuzila ukutya okwexeshana okwexeshana kuyaziwa njengenye yeendlela ezilungileyo zokunciphisa umzimba. Funda ngendlela enokukunceda ngayo ukuba unciphise umzimba kwaye ugcine ukuwenza ulungile.
10 Iibhontshisi ezimnandi zokuNceda ulahle ubunzima
Uluhlu lweendlela zokupheka zeembotyi ezili-10 zokukunceda ukunciphisa umzimba.
IiNkqubo ezi-9 zokuCwangciswa kokutya eziya kukunceda utye okusempilweni
Ukutya okunempilo kwenziwa lula ngokucwangcisa ukutya. Nazi ii -apps zokucwangcisa izidlo ezili-9 ze-iOS kunye ne-Android eziza kunciphisa uxinzelelo malunga namaxesha okutya.
Iindlela ezili-9 zokutya ngendlela ecocekileyo zinokukunceda uzive ungcono
Funda izizathu ezininzi zokuba kutheni ukutya ukutya okucocekileyo kuzisa ubutyebi bezibonelelo zengqondo nezomzimba wakho.
Ngaba ukunciphisa umzimba kuya kuyiphucula nyani impilo yakho?
Ngaba ucinga ukuqala ukucoca ukulahleka kobunzima? Funda isikhokelo sokugqibela osifunayo ngaphambi kokuba ucoce ukuze uzigcine usempilweni.
20 Isidlo sakusasa esimnandi nesisempilweni sokunciphisa umzimba
Ngaba uzama ukunciphisa umzimba kwaye ufuna ukutya okunempilo? Nantsi i-20 yesidlo sakusasa esimnandi nesisempilweni yokwehla kobunzima nangona ungxamile kusasa.
I-13 yokutya okuLungileyo kukutya ekulahlekeni kobunzima kunye namandla
Ngaba uzama ukuphalaza iipawundi kwaye wandise amandla akho kodwa ungayeki ukutya? Nazi izidlo ezili-13 ezilungileyo zokutya ukunciphisa umzimba kunye namandla.
Kutheni Ndingahlebi? Kutyhilwe Izizathu ezi-7
'Kutheni ndingahlali emzimbeni?' Usenokungabi ulahlekelwa ngumzimba ngenxa yeempazamo ezilula ezilungiswa ngokulula. Nazi izisombululo zakho.
Yintoni oza kuyitya ngaphambi kokuba uzilolonge kusasa (i-10 elula yokujonga isidlo sakusasa)
Awazi ukuba ungatya ntoni ngaphambi kokuba usebenze kusasa? Yenza ukuba uqalise ukuzilolonga ngale mibono ilula yesidlo sakusasa (kwaye ungatyi)!
Ngaba iProtein engakumbi oyityayo, ngaba uyakha ngokukhawuleza izihlunu?
Ngaba awuziboni iziphumo kwindawo yokuzivocavoca? Unokutya iiprotheni ezininzi. Iintsomi zeprotheyini yomqeqeshi wokuzilolonga ukuze wakhe izihlunu ngendlela esempilweni.